तपाईंलाई शावर सेक्स मन पर्छ? निकै उपयोगी छन् यी टिप्स... | Hamro Doctor News
तपाईंलाई शावर सेक्स मन पर्छ? निकै उपयोगी छन् यी टिप्स...
के तपाईंलाई थाहा छ, प्रायः जसो कपलहरु शावर सेक्सलाई सबैभन्दा राम्रो किन मान्छन् ? शायद तपाईंलाई यो कुरामा विश्वास लाग्दैन होला तर, २०१४ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार शावर सेक्स सुरक्षित सेक्सको लागि धेरै नै प्रसिद्ध छ , १ हजार मानिसमा गरिएको सो अध्ययनमा ५४ प्रतिशत कपलले यस सेक्समा संतुष्टि महसूस गर्ने गर्छन् । त्यसैले आज तपाईंका लागि शावर सेक्सको बारेमा केही यस्ता टिप्स दिँदैछौ जसले तपाईंलाई शावर सेक्सको क्रममा मद्दत पुग्नेछ ।
शावर सेक्स जति सुरक्षित मानिन्छ, त्यति नै त्यसको लागि तयारी पनि गर्नुपर्छ । शावर सेक्सका लागि दुवै पार्टनरलाई फ्लेक्जिबल हुनु पर्छ । अर्थात् शावर सेक्सका लागि दुवै पार्टनर तयार हुनुपर्छ । शावर सेक्स तपाईंको माथिल्लो र तल्लो दुवै शरिरको लागि आवश्यक हुन्छ ।
शावर सेक्सको लागि अपनाउनुस् यी कुरा
शावर सेक्सको बेला चिप्लिने डर हुन्छ । त्यसैले पहिले नै सावधानी अपनाउनु पर्छ । बजरामा त्यसका लागि विभिन्न प्रकारका सामानहरु पाइन्छ । जस्तैः नचिप्लिपने डोर मेट, तकिया, रबरको पानीमा नडुब्ने मेट्स (स्किडप्रूफ मेट्स) सामान तपाईं बजारमा सहजै किन्न सक्नु हुनछ । यस्ता सामाग्रीको प्रयोगले तपाईं शावर सेक्सको बेला कुनैपनि पोजÞिशन सजिलै अपनाउन सक्नुहुनेछ ।
पानी धेरै चिसो वा तातो छ/छैन भनेर ख्यान गर्ने
शावर सेक्सको लागि पानीको तापमान ध्यानमा राख्नुपर्छ । कसैलाई चिसो पानीमा शावर सेक्स मन पर्छ भने कसैलाई तातो पानीमा । यस अवस्थामा पानीको तापमानको सँधै ख्याल राख्नुपर्छ कि पानीको तापमान दुवै पार्टनरका लागि समान होस र त्यसले कुनै असहजता नहोस् ।
सेक्स बाहेक जिस्काउने
शावरको क्रममा पार्टनरले सेक्समा मात्रै ध्यान दिनु हुँदैन । सेक्सका साथ साथे बीच बीचमा एक अर्कालाई जिक्साउने जस्ता काम पनि गर्नुपर्छ ताकि सेक्सलाई अझ बढि इन्जोय गर्न सकियोस ।
एक अर्काको जीउ सुम्सुम्याउने
शावर सेक्सको क्रममा दुवै पार्टनरले एक अर्कालाई अंगालो मार्ने, स्क्रब गर्ने र विस्तारै विस्तारै एक अर्काको शरीरमा विस्तारै हातले सुम्सुम्याउने ।
शावरे सेक्सको लागि बेस्ट पोजिशन
शावर सेक्सको बेला बेस्ट पोजिशनको कुरा गर्ने हो भने तपाईंको बाथरुम कत्रो छ त्यसमा भर पर्छ । तर, पनि शावर सेक्सका लागि सिटिंग पोजिशन अर्थात् बसेर गरिने सेक्स पोजिशनलाई बेस्ट मानिन्छ ।
Last modified on 2018-09-09 16:59:15